Tsara ho Fantatra Momba ny Valanoranon’ny Voay | Nisy Namorona Ve?
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bengali Bichlamar Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Goujrati Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Luvale Malagasy Malayalam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Myama Norvezianina Ourdou Pangasinan Pendjabi Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tamoul Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tok Pisin Tseky Tsonga Twi Télougou Vietnamianina Waray-Waray Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Ny Valanoranon’ny Voay
NY VOAY no biby mafy kaikitra indrindra. Avo telo heny noho ny hamafin’ny kaikitry ny liona na ny tigra, ohatra, ny hamafin’ny kaikitry ny voain-dranomasira any Aostralia. Mbola miavaka koa anefa ny valanoranony. Mora mahatsapa zavatra izy io, ka na ny tendron’ny rantsantanantsika aza tsy mahatoraka azy. Ahoana no ahavitany an’izany nefa ny hodiny matevina be?
Misy retsika an’arivony ao amin’ny valanoranon’ny voay. Hoy ilay mpikaroka atao hoe Duncan Leitch: “Lavaka iray ao amin’ny karandohan’ny voay no ivoahan’ireo selam-pitatitra.” Voaro àry izy ireo rehefa manao ny asany. Miara-miasa amin’ny retsika ireo selam-pitatitra ireo, ka izany no mahatonga an’ilay valanorano ho mora mahatsapa zavatra. Tena mahery io fahatsapana io any amin’ny faritra sasany ao amin’ny valanoranony, ka tsy misy fitaovana mahavita mandrefy azy. Tsy mahagaga raha hain’ny voay tsara ny manavaka ny sakafo sy ny fakofako ao am-bavany. Vitany koa ny mitondra ny zanany kely ao am-bavany nefa tsy atahorana ho voakaikitra izy ireo. Tena mahavariana ny valanoranon’ny voay, satria sady matanjaka no mora mahatsapa zavatra.
Ahoana ny hevitrao? Vokatry ny evolisiona (na fiovana miandalana) ve ny valanoranon’ny voay, sa nisy namorona?
Hizara Hizara Ny Valanoranon’ny Voay